Ny Galaxy S10 dia mamaky ny firaketana mialoha ny famandrihana rehetra any Etazonia | Androidsis
Ny baiko alohan'ny Samsung Galaxy S10 dia mamaky ny firaketana amerikana
Toa nivarotra ny Samsung Galaxy S10 any Etazonia mahay mamaky firaketana eto amin'ity firenena ity izy ireo. Nail varotra izay manao izany koa any Angletera satria fantatra tamin'ny zoma lasa teo izany ary mametraka ny Galaxy S10 amin'ny toerana tsara ho iray amin'ireo finday avo lenta amin'ny taona.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manana i Samsung miloka amin'ny fomba hanolorana modely hatramin'ny 4 avy amin'ny Galaxy S10 izay ananantsika amin'ireo faritra ireo mankany amin'ny Galaxy S10e, Galaxy S10 ary Galaxy S10 +. Samy manana ny fikirakirany avy ny tsirairay ary manjaka ny Galaxy S10 + miaraka amina sensor sensor amin'ny dian-tànana eo amin'ny efijery, batterie 4.100mAh ary fikirakirana fakan-tsary 5, 3 ho an'ny aoriana ary 2 ho eo aloha.
Ary izany dia na dia ao amin'ny Manatsara ny tarehimarika efa nananany tamin'ny taon-dasa i Sina ny Galaxy S9 amin'ny baiko mialoha. Ka ny zava-drehetra toa manondro fa manana zavatra tokony hafaliana i Samsung miaraka amin'ny tsingerintaona faha-XNUMX an'ny andiany Galaxy S.
Io no maodely lafo indrindra izay nahatratra 57 isan-jaton'ny famandrihana mialoha izany any Etazonia. Mitovy ny isan-jato isan-jato azo tamin'ny pre-bookings tany Angletera. Ny zava-misy mahaliana iray hafa dia ny hoe any Angletera dia ny lozisialy miloko mavitrika indrindra dia ny Prism amin'ny mainty any Etazonia ary ny Prism amin'ny fotsy kosa ho an'ny maodely amerikana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, araka ny fanamarihana ny haino aman-jery isan-karazany sy ireo tarehimarika mamaky firaketana ireo dia afaka milaza izany isika ny Galaxy S10 + no finday mandresy amin'ity taona ity. Tsy ho an'ny fananana ny efijery tsara indrindra eny an-tsena, Fakan-tsary 5, bateria lehibe, famaranana premium miaraka amina endrika kanto, scanner an-tserasera ary fifandanjana lehibe miaraka amina puce / 8GB RAM lehibe sy fitehirizana 128GB, fa na dia afaka manao manana ny sary am-boalohany indrindra sary efa hitantsika izay nandritra ny taona maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny baiko alohan'ny Samsung Galaxy S10 dia mamaky ny firaketana amerikana
Fitbit Versa Lite no fanombohana vaovao an'i Fitbit ho an'ny smartwatches
Ny Huawei P30 Lite dia mampiseho hozatra amin'ireo fari-pitsipika ireo